I-MONROE Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
Lithini igama lokugqibela elithi Monroe?
I-Monroe yiStots Gaelic isneniselo isithi "ukusuka emlonyeni womlambo." Ukusuka kubunzana , okuthetha "umlomo" kunye ne- roe , okuthetha "umlambo." Kwi-Gaelic 'b' idla ngokuba 'm' - ke igama elithi MONROE.
Igama lomthombo: isiScottish , isi-Irish
Igama elongezelelweyo Igama lokuphala : MUNROE, MUNROSE, MONRO, MUNRO, UMASEKELA
Abantu abaPhezulu ngegama leMONROE
UJames Monroe - umongameli we-5 waseUnited States
UMarilyn Monroe - umlingisi waseMerika (ozelwe nguNorma Jeane Mortenson)
Vaughn Monroe - umculi waseMerika, ixilongo kunye nenkokeli enkulu yeqela
UBill Monroe - umculi waseMerika
U-Alan H. Monroe - uprofesa; umdali wokulandelelana kukaMonroe
Kuphi i-MONROE Igama lomninzi kakhulu?
Ngokusasazwa kwefayili ukusuka kwi-Forebears, isibongo saseMonroe sixhaphake kakhulu eUnited States, apho sithandwa kulo lonke uhlanga. Itholakala kumanani amaninzi kwezinye zezona zikhulu kunabantu abaninzi, kuquka iTexas, eCalifornia naseNew York, kwakunye neNorth Carolina neFlorida.
I-WorldNames PublicProfiler nayo ichaza i-Monroe njengento eqhelekileyo e-United States, kuquka iSithili sase-Columbia, North Carolina, e-Indiana, e-Alaska, eLouisana, eVirginia, eKentucky, e-Idaho, eMichigan naseMississippi.
Izibonelelo zoGenesalogy for the name MONROE
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lokugqibela laseScotland kunye nesi sikhokelo samahhala kwiintsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo elivela eSkotland.
Crest Family Crest - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengokwentsapho yaseMonroe okanye iingubo zeengalo kwiSpeoe. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Iprojekthi ye-Munro DNA
Abantu abathile ngegama le-Munro kunye neenguqu ezinjengeMonroe bamenywa ukuba bathathe inxaxheba kweli qela leqela le-DNA kwinzame yokufunda okungakumbi ngemvelaphi yentsapho yaseMonroe. Lewebhusayithi ifaka ulwazi malunga neprojekthi, uphando olwenziwayo kuze kube yimini, kunye nemiyalelo malunga nokuba uthathe inxaxheba njani.
I-MONROE yoLuntu lweNzalana
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwiinzala zika-Monroe okhokho emhlabeni jikelele.
I-FamilySearch - U-MONROE Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezu kwezigidi eziyi-1.3 ezivela kwiirekhodi zembali kunye nemigangatho yentsapho exhamnene nomgca ehlobene nomnxeba we-Monroe kule website ye-intanethi ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama le-MONROE Igama lokuthumela
Uluhlu lokuposa lwangaphandle lwabaphandi begama le-Monroe kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwa ngophando lwemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - I-MONROE Ulwalamano & Imbali Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Monroe.
I-GeneaNet - iRekodi zeMonroe
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba we-Monroe, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Monroe Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye nezembali zabantu ngabanye ngefayile ye-Monroe kwi-website ye-Genealogy Today.
I-CRAWFORD Igama lokugqibela igama kunye nomthombo
I-BAILEY - Itsho Igama & Isiqalo
I-WISNIEWSKI - Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
SCHULZ Igama lokugqibela Umthombo kunye nenjongo
Indlela Yokuqalisa Ukufunda IsiJapan
Indlela iSixeko Kwisiphamla saba yiNkunzi yeAztec
Imfazwe YaseMerika Yomntu: I-General General Irvin McDowell
Iingcaphulo zonyaka omtsha okhuthazayo
Iingcebiso ze-Omaha High-Low
Yintoni ongayilindela xa usebenzisa isicelo seLDS (Mormon) Mission
Umculo weMveli kunye noHlelo lwaMalungelo oLuntu
INzululwazi emva koTshintsho lwemozulu: amaLwandle